Maxay Soomaaliya uga dhigan tahay wajiga koowaad ee deyn cafinta? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
March 26, 2020 at 05:51 Maxay Soomaaliya uga dhigan tahay wajiga koowaad ee deyn cafinta?2020-03-26T05:51:34+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Hey’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay gaartay marxaladda u qalmidda deyn cafinta wadamada faqriga. Soomaaliya ay noqoneyso wadankii 37aad ee caalamka ee gaara heerkaan dayn cafinta.
”Waxaan jeclahay in aan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyo guusha dadaalkii sanadihii la soo dhaafay ay ku bixiyeen dib u habeynta maaliyadda oo halkaan na soo gaarsiyay” ayay tiri agaasimaha maamulka hey’adda lacagta adduunka, Kristalina Georgieva.
Mar wax laga weydiiyay in Soomaaliya ay deyn weydiisan karto hey’adda IMF iyo bangiga adduunka ayaa waxaa uu sheegay inay adag tahay in Soomaaliya ay deyn qaadato ilaa iyo inta ay kasoo dhameystireyso qeybaha kale ee deyn cafinta.
« Debt relief milestone in Somalia, as World Bank, IMF, call for global payment suspension in light of COVID-19
Labada goolhaaye iyo magaalada uu ugu jcelyahay & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Thibaut Courtois »